स्थानीय तहमा कर्मचारीलाई तलब खुवाउन अन्योल - Karobar National Economic Daily
स्थानीय तहमा कर्मचारीलाई तलब खुवाउन अन्योल
query_builderAugust 22, 2017 12:25 PM supervisor_accountभगवान खनाल visibility552
काठमाडौंः संघीयता कार्यान्वयनमा कर्मचारी व्यवस्थापन चुनौती बनिरहँदा स्थानीय तहका कर्मचारीको तलब भत्ता खुवाउन पनि समस्या देखिएको छ । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो महिना बिते पनि स्थानीय तहका कर्मचारीको तलब भत्ता कसरी दिने भन्नेमा कार्यकारी अधिकृतहरूले अन्योलता देखिएको बताएका छन् ।
स्थानीय तहको निर्वाचन नभएको प्रदेश नं २ को सिरहाको लहान नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत गजेन्द्रनाथ बर्मा यस्तै समस्याको चेपुवामा परेका छन् । चालू आवको गत साउनको तलब माग्दै स्थानीय तहका कर्मचारी आए पनि तलब कसरी दिने भन्ने अन्योल देखिएको बर्माले गुनासो गरे । “कृषि, स्वास्थ्य, पशुका स्थानीय तहका कर्मचारी तलब माग्दै आएका छन्,” उनले भने, “तर, अन्योलताले दिन सकेको छैन ।”
“चालू वर्ष सिस्टमले बजेट(तलब समेत) नगरपालिकामा आए पनि कर्मचारीहरूलाई कसरी दिने भन्ने अन्योलता रहेको छ,” अर्का कार्यकारी अधिकृतले भने, “भुक्तानीको प्रक्रिया के हो ? पे रोल कसले बनाउने हो ? कस्तो हुने हो भन्नेमा अन्योल छ ।”
कर्मचारीले मागेपछि तलब दिने हो कि नमागे पनि दिने हो ? केही जानकारी नभएकाले अन्योल भएको हो । कर्मचारीको तलब खातामा हाल्ने कि के गर्ने भन्ने पनि समस्या देखिएको अधिकृतहरू बताउँछन् । खर्च कसले लेख्ने भन्ने पनि समस्या छ । त्यसको भेरिफिकेसनको प्रक्रियाबारे पनि जानकारी प्राप्त हुन नसकेको ती अधिकृत बताउँछन् ।
उता स्थानीय तहमा शिक्षक र शिक्षा सेवाका कर्मचारीको विवरण छैन । यसैगरी प्रदेश २ मा चालू आवको पहिलो त्रैमाससम्मको पुँजीगत खर्च पनि हुनसक्ने अवस्था छैन । केन्द्र सरकारको संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले पुँजीगत कार्यक्रम बनाउनु भनेकाले त्यहीअनुसार काम गरिएको बर्मा बताउँछन् ।
हालै आएको बाढीले प्राकृतिक प्रकोपका घटना बढाएकाले पुँजीगत खर्च कसरी गर्ने समस्या सिर्जना भएको छ । थुप्रै पुल, पुलेसा र कल्र्भट भत्किएको भए पनि मर्मत गर्न वा डाइभर्सन गर्नका लागि पुँजीगत खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
केन्द्र सरकारले जनप्रतिनिधि आएपछि पँुजीगत खर्च गर्न भने पनि आप्mनै विवेकमा प्रकोपका घटनामा भने केही रकम उनीहरूले खर्चिएको बताए । बजेट छ तर खर्च गर्ने अवस्था नहुँदा जनताका विकासे योजनाले पनि बजेट पाउन सकेको छैन ।
स्थानीय तह निर्वाचन बाढी संघीयता